Kooxo hubeysan oo weerar ku qaaday Xuduuda Wadamada Soomaaliya iyo Kenya – SBC
Kooxo hubeysan oo weerar ku qaaday Xuduuda Wadamada Soomaaliya iyo Kenya
Wararka ka imaanaya Xuduuda wadamada Soomaaliya iyo Kenya ayaa ku waramaya in Kooxo Hubeysan oo loo maleeynayo Maleeshiyo Soomaaliyeed ay weerar gantaal ku qaadeen Gaari maraya xuduuda kaasi oo ay ku dhinteen afar qof oo Kenyan ah.
Sarakiisha Booliiska wadanka Kenya ayaa sheegay in Macalin Iskuul iyo saraakiil dowlada ka tirsan ay ku jiraan dadka weerarkaas gantaal wax ku noqday iyaga oo xusay in ay socdan Baaritaano la xiriira dhcdadan.
Wararka kale ee Deegaanka Weerarka ka dhacay laga helayo ayaa ku waramaya in kooxaha dableyda ay rasaas ay isweydaarsadeen Ciidamo Kenyan ah oo gaariga la socday kuwaasi oo markii gaariga ku dhuftay gantaal nooca garabka laga tuuro.
Sarkaal sare oo booliiska Kenya ka tirsan ayaa wakaalada wararka ee Reuters u sheegay in uu gaariga gantaalka lagu dhuftay gabi ahaanba burburay iyadoo dhamaan rakaabkii saarnaa oo ahaa afar qofna ay ku dhinteen weerarkaasi.
Goobta weerarkan uu ka dhacay ayaa 110 km u jirta degmada mandhera waxaana dadka dhintay ku jiray Madaxii Iskuul sare oo deegaankaas ku yaala
afhayeenka Ciidamada Booliiska wadanka Kenya Eric Kiraithe ayaa sheegay in deegaanka weerarku ka dhacay ay u direen ciidamo si ay usoo hubiyaan Amaanka Goobta una baadigoobaan Kooxaha Falkan geystay isaga oo eeda weerarkan shakigeeda dusa u saaray kooxda hubeysan ee Alshabaab
eeda Dowlada Kenya ee wararkan inay ka danbeysay Alshabaab waxaa uu ku soo aadayaa ka dib markii dhawaan dowlada Kenya ay ku eedeysay in afdubyada dalkeeda ka dhacaya ay ka danbeeyaan Alshabaab wallow Xarakada ay eedaas iska fogeysay iyaga ku hanjabay inay dulaanka Kenya ee Soomaaliya ka jawaabi doonto.
Weerarada ka dhacay todobaadyada la soo dhaafay Wadanka Kenya ayaa ku soo beegmaya xilli weli ciidamada Kenya ay howlgalo meleteri ka wadaan gudaha wadanka Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Xigga xuduuda Wadankaasi.